2 TAIYO အစိမ်းရောင်နှင့်အတူအလွှာစံ PCB အလတ်စား TG PCB ထုတ်လုပ်သူ 1.6mm ဘုတ်အဖွဲ့ထူ 2oz ကြေးနီ Mask - တရုတ်နိုင်ငံ2TAIYO အစိမ်းရောင်နှင့်အတူအလွှာစံ PCB အလတ်စား TG PCB ထုတ်လုပ်သူ 1.6mm ဘုတ်အဖွဲ့ထူ 2oz ကြေးနီပေးသွင်း Mask,စက်ရုံ -WMD
440*132.08မီလီမီတာ / 1pcs
2အလွှာ TAIYO PSR 4000
2အလွှာ TG150, မျက်နှာပြင်ကုသမှု HASL ပြီးဆုံးကြေးနီဖြစ်ပါတယ်2/ 2oz ဖြစ်ပါသည်, အထူ 1.6mm ဖြစ်ပါသည်±10% , ပစ္စည်း FR4 ဖြစ်ပါသည်, Tg150. အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ပါသည်2TAIYO PSR နှင့်အတူအလွှာဘုတ်အဖွဲ့ 4000 အလယ်အလတ် GREEN G23K ref F5K1. ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်ဍာ PCB ရှိ , PCB ထုတ်လုပ်သူ, PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း, ဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူ, ul PCB, LED Lighting PCB, MCPCB, လူမီနီယမ် PCB, သတ္တု Core PCB, RoHS,ISO 9001, ISO ကို 14001 အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု PCB, power supply PCB, တင်းကျပ် PCB,2layer,4layer, 6အလွှာ, 8 အလွှာ PCB, တရုတ် PCB စက်ရုံ, PCB Assemby, PCBA, VIAS PCB သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံမျက်စိကန်းမှတစ်ဆင့်, ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်စက်ရုံ, အသံ PCB, နှင့်မှတစ်ဆင့်-In-Pad PCB.
နှစ်ဆအလွှာ, မိခင်ဘုတ်, မြင့်မားသော TG 170, S1000-2, အောက်ခြေဘက်အဘယ်သူမျှမဂဟေဆက်က ENIG ဖြစ်ပါတယ် Mask ဖြစ်ပါသည်. Big ရွှေကိုဧရိယာ.